यस्तो खाना बन्थ्यो दोस्रो विश्व युद्धमा, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
यस्तो खाना बन्थ्यो दोस्रो विश्व युद्धमा
एजेन्सी । भोक र आवश्यकता मानिसलाई जे पनि गर्न बाध्य बनाउँछ । पेटको आगो निभाउन खाना नै अन्तिम उपाय हो । यही भोकले मानिसलाई विभिन्न किसिमका खाना बनाउन बाध्य बनाएको छ ।
हरेक देशमा कुनै न कुनै पराम्पारिक भोजन खास अवसरमा बनाइन्छ ।
यी भोजनको पहिचान कहिले खुसीको माहोलमा आयो भने कहिले संकटको अवस्थामा । नयाँ भोजन बनाउन अभावले सिकायो ।
खास गरि युद्धको अवस्थामा जब खानको कमी हुन्थ्यो, मानिसहरु बचेको खाना सम्हालेर राख्थे । र फेरि त्यसैबाट नयाँ भोजन तयार गर्थे ।
यस्ता भोजनका अनगिन्ती रेसिपी उपलब्ध छन, जसको बारेमा किताब पनि लेखिएका छन् ।
आज हामी यस्तै भोजनबारे जानकारी दिँदै छौं ।